Iwu kuki - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > kuki Policy
Dị ka ọ na-adịkarị na ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara niile saịtị a na-eji kuki, nke bụ obere faịlụ ndị ebudatara na kọmputa gị, iji melite ahụmịhe gị. Peeji a na-akowa ozi ha na-achikota, otu anyi si eji ya na ihe kpatara na anyi aghaghi ichota kuki ndia mgbe ufodu. Anyị ga-ekerịta otu ị ga - esi gbochie kuki ndị a ịchekwa agbanyeghị nke a nwere ike iweda ma ọ bụ 'mebie' ụfọdụ ihe ọrụ saịtị ahụ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki, biko gụọ “Gịnị Bụ Kuki”. Ozi gbasara kuki site na Iwu Cookies a sitere Nzuzo Generator Nzuzo.
Otu anyi si eji kuki
Anyị na-eji kuki maka ọtụtụ ihe kpatara ya n'okpuru ebe a. O di nwute na otutu ihe enwereghi uzo ozo di iche iche maka ikwusi kuki n'enweghi ike igbochi oru na njirimara ha tinye na saịtị a. A na-atụ aro na ị ga-ahapụ kuki niile ma ọ bụrụ na ị maghị ma ị chọrọ ha ma ọ bụ na a na-eji ha iji nye ọrụ ị na-eji.
You nwere ike igbochi mwube kuki site na ịhazi ntọala ihe nchọgharị gị (lee ihe nchọgharị gị Enyemaka maka otu esi eme nke a). Mara na igbochi kuki ga-emetụta arụmọrụ nke a yana ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ ị gara. Cookieskwụsị kuki ga-ebutekarị na-egbochi ụfọdụ ọrụ na atụmatụ nke saịtị a. Ya mere, a na-atụ aro ka ị ghara iwepụ kuki. Emebere Iwu Cookies a site na enyemaka nke Cookies Policy Generator si CookiePolicyGenerator.com.
Kuki anyị Wepụtara
Kuki metụtara akaụntụ Ọ bụrụ na ị mepụtara akaụntụ na anyị mgbe ahụ anyị ga-eji kuki maka njikwa nke usoro ịbanye na nchịkwa izugbe. A ga-ehichapụ kuki ndị a mgbe ị na-apụ apụ mana n'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike mechaa emesịa icheta mmasị saịtị gị mgbe ịpụ.
Nbanye metụtara kuki Anyị na-eji kuki mgbe ịbanye nbanye ka anyị wee nwee ike icheta eziokwu a. Nke a na - egbochi gị ịbanye na oge ọ bụla ị gara na ibe ọhụrụ. A na-ewepụ ma ọ bụ kpochapụ kuki ndị a mgbe ị na-apụ iji hụ na ị nwere ike ịnweta naanị njirimara ejiri na mpaghara mgbe ịbanye.
Kuki mmasị saịtị Iji nye gị nnukwu ahụmịhe na saịtị a anyị na-enye ọrụ ịtọ mmasị gị maka otu saịtị a si agba ọsọ mgbe ị jiri ya. Iji cheta mmasị gị, anyị kwesịrị ịtọ kuki ka enwere ike ịkpọ ozi a mgbe ọ bụla ị na-emekọrịta peeji nke mmasị gị metụtara.
N'ọnọdụ ụfọdụ pụrụ iche anyị na-ejikwa kuki nke ndị ọzọ tụkwasịrị obi. Akụkụ nkọwa ndị na-esonụ nke kuki ndị ọzọ nke ị nwere ike izute site na saịtị a.
Saịtị a jiri Google Analytics nke bu otu ihe nyocha zuru ebe niile tụkwasịrị obi na webụ maka inyere anyị aka ịghọta otu i si eji saịtị ahụ na ụzọ anyị ga - esi meziwanye ahụmịhe gị. Kuki ndị a nwere ike soro ihe dị ka ogologo oge ị nọrọ na saịtị ahụ na ibe ndị ị gara ka anyị nwee ike ịga n'ihu na-emepụta ọdịnaya na-adọrọ mmasị. Maka ozi ndị ọzọ na kuki Google Analytics, lee ibe Google Analytics peeji nke.
Anyị na-eji Hotjar iji ghọta nke ọma mkpa ndị ọrụ anyị yana iji bulie ọrụ na ahụmịhe a. Hotjar bụ ọrụ teknụzụ na-enyere anyị aka ịghọta nke ọma na ahụmịhe ndị ọrụ anyị (dịka oge ole ha nọrọ na ibe, njikọ nke ha họọrọ ịpị, ihe ndị ọrụ na-eme na ndị na-adịghị amasị, wdg) na nke a na-enyere anyị aka iwulite ma debe ọrụ anyị site na nzaghachi onye ọrụ. Hotjar na-eji kuki na teknụzụ ndị ọzọ iji nakọta data na omume ndị ọrụ anyị na ngwaọrụ ha. Nke a gụnyere adreesị IP nke ngwaọrụ (arụ ọrụ n'oge nnọkọ gị ma chekwaa ya na ụdị akọwapụtara), nha ihu igwe ngwaọrụ, ụdị ngwaọrụ (ihe nchọpụta ngwaọrụ pụrụ iche), ozi ihe nchọgharị, ọnọdụ ala (naanị mba), na asụsụ kachasị amasị iji gosipụta. weebụsaịtị anyị. Hotjar na-echekwa ozi a na nnọchite anyị na profaịlụ njirimara pseudonymized. A machibidoro Hotjar iwu ire data ọ bụla anakọtara na nnọchite anyị. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko lee akụkụ 'banyere Hotjar' nke Hotjar nkwado saịtị.
Site n'oge ruo n'oge, anyị na-anwale ihe ọhụrụ ma mee mgbanwe dị iche iche n'ụzọ dị iche iche na-esi enweta saịtị ahụ. Mgbe anyị ka na-anwale ihe ọhụrụ ndị a nwere ike iji kuki ndị a iji hụ na ị nwetara ahụmahụ na-adịgide adịgide mgbe ịnọ na saịtị ahụ na-eme ka anyị ghọta ihe kachasị mma ndị ọrụ anyị na-aghọta.
Olileanya nke ahụ emeela ka ihe doo anya maka gị na dịka e kwuburu na mbụ ma ọ bụrụ na enwere ihe ị na-ejighị n'aka ma ịchọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị na ọ na-adịkarị mma ịhapụ kuki enyere ma ọ bụrụ na ọ na-emekọrịta otu n'ime njirimara ị na-eji na saịtị anyị.
Ma ọ bụrụ na ị ka na-achọ ozi ndị ọzọ mgbe ahụ i nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na otu n'ime ụzọ ịkpọtụrụ anyị kachasị mma:
Bromley, Lewisham & Greenwich Uche
Clọ Anchor, 5 Station Road, Orpington, Kent, BR6 0RZ